I-T4E yeeNkcukacha zeeNkcukacha ze-Intshurensi yengqesho yaseCanada
I-T4E yaseThanada yeeNtlawulo zeNtlawulo zeNgqesho zinshorensi
I-slip yaseThanada yaseTanzania yeT4E, okanye iNkcazo yeNkcazo yeNgqesho kunye nezinye iiNzuzo, ikhutshwa yiNkonzo yaseCanada ukukuxelela kunye ne- Canada Agency Revenue Agency (i-CRA) isixa esiphezulu seNkcitho ye-Intshurensi yengqesho ehlawulwa kuwe ngonyaka werhafu wangaphambili, irhafu yengeniso ncitshisiwe kunye nayiphi na imali ehlawulwa kwi-overpayment.
Umgca wokugqibela weT4E i-Slips yentlawulo
I-T4E yentlawulo yeerhafu kufuneka ikhishwe ngomhla wokugqibela kaFebhuwari ngonyaka emva konyaka wekhalenda apho i-T4E irhafu isetyenziswa khona.
Isampuli T4E Isaphulelo sentela
Isampuli yeT4E yentela kwisayithi ye-CRA ibonisa ukuba isalathisi serhafu ye-T4E sibonakala njani. Ukufumana ulwazi olungakumbi malunga noko kubandakanywa kwibhokisi nganye kwi-slip ye-T4E yentela kunye nendlela yokujongana nayo xa ufaka irhafu yengeniso yakho, klikha kwibhokisi yebhokisi kwimenyu yokudonsa okanye nqakraza kwibhokisi kwisampuli yeT4E yentela.
Ukufakela i-T4E i-Slips yentlawulo nge-Return Tax Tax yakho
Xa ufaka iphepha lokubuyisela irhafu yengeniso, faka iikopi ze-T4E yerhafu yokufumana irhafu. Ukuba ufaka irhafu yengeniso yakho ngenzuzo usebenzisa i- NETFILE okanye i- EFILE , gcina iikopi zeerhafu zakho zeerhafu kunye neirekhodi zakho iminyaka emithandathu xa i-CRA icela ukuba ibone.
I-T4E yeThafu yeShafu
Ukuba awufumani slip sakho serhafu, fowuna iNkonzo yeKhanada ku-1 800 206-7218 ngeeyure zoshishino ukucela impinda. Uya kubuzwa imibuzo ukuze uqinisekise ubungqina bakho.
Nangona ungayifumana isalathisi sakho sentela ye-T4E, faka ireyiti yakho yerhafu yengeniso ngokukhawuleza ukuba ubalekele izigwebo zokufakela irhafu yengeniso yakho emva kwexesha .
Bala iinzuzo zakho ze-Intshurensi yengqesho kunye nokuncitshiswa okunxulumeneyo kunye neengxowa-mali onokuzibhenela ngokukhawuleza njengoko ungasebenzisa nayiphi na ingcaciso onayo. Faka incwadana ethetha ukuba wenze ntoni ukuze ufumane ikopi yecala lokuhlawulwa kwentela yeT4E. Faka iikopi zaliphi na izitatimenti kunye nolwazi owalisebenzisileyo ekubaleni iingeniso zengeniso kunye nokuncitshiswa kwe-slip ye-T4E ekhoyo.
Ezinye i-T4 Iinkcukacha zeRhafu
U-Obama uchaza "Ukungafuni" ukuSalathisa ibhendi kwi-Viral Hoax
Amagama angama-100 aqhelekileyo asetyenziswayo ngesiNgesi
Juz '6 yeKur'an
ETurkey kwiYurophu yaseYurophu
Funda ngakumbi malunga namaGnomes aqokelelweyo
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: I-Indossare
Iimpawu ezimtsha zehlabathi
Yini Imasiko Yomlomo?